Assembly PCB Volume - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture dia misahana manokana amin'ny serivisy fivoriambe PCB ambany sy serivisy fanangonana Volume antonony miaraka amina asa namboarina. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana mandroso ho an'ny fivoriambe PCB fanao ambany sy afovoany. Ary manana tsipika fivorian'ny maro izahay izay afaka manitsy sy manova mora foana arakaraka ny takiana amin'ny vokatra elektronika sy ny masontsivana ao anatin'ny fotoana fohy kokoa.
Izahay dia mikarakara ny fivoriambe PCB iray manontolo avy amin'ny famokarana PCB, ny fividianana singa, ny fivorian'ny SMT, amin'ny alàlan'ny fanangonana loaka, fitsapana ary fandefasana. Amin'ny maha mpanamboatra fivoriambe elektronika antsika manolotra serivisy fivoriambe PCB boky, manome toky izahay fa maimaimpoana tsy misy ahiana ny vokatrao miaraka amin'ny vidiny ambany.
PCBFuture’s Fahaiza-manao ao amin'ny Volume PCB Assembly
Izahay dia manam-pahaizana manokana momba ny fivorian'ny birao eo amin'ny sehatry ny indostria izay manolotra serivisy fivorian'ny birao vita pirinty azo itokisana. Ireo manam-pahaizana za-draharaha sy tompon'andraikitra dia manampy ny PCBFuture hanolotra ny mpanjifanay amin'ireo fivoriambe mifanaraka indrindra antenaina amin'ny fampiharana azy manokana.
• Famolavolana fitsapana (DFT)
• Volavola ho an'ny famokarana (DFM)
• fivorian'ny BGA
• SMT manangona fametrahana singa avy amin'ny 0402 mankany amin'ny QFP avo lenta
• Fivoriana mifanaraka amin'ny RoHS
• Amin'ny alàlan'ny soldering PCB lavaka
• Serivisy fanodinana PCB tanana
• Fivoriambe PCB tsy misy firaka
• Famolavolana firafitry ny singa mazava tsara
• Fomba fanasana rano madio tsy madio
Ny tombony ho an'ny antsika Assembly PCB Volume:
• Ny takelaka boriborintsika vita pirinty rehetra dia fitsapana 100% (E-test, fitsapana Solderability, FQC ary sns).
• Tsipika fivorian'ny maro hamaly ny takian'ny mpanjifa indrindra.
• Omeo serivisy fanangonana PCB prototype ho an'ny fitsapana alohan'ny famokarana betsaka.
• Atombohy ny famokarana betsaka aorian'ny mpanjifa mandalo ny fitsapana rehetra na manome famokarana fananganana PCB prototype fanindroany.
• Fanatanterahana ny fizahana AOI sy ny fizahana maso amin'ny fizotry ny fivorian'ny PCB rehetra.
• Mampiasa ny fizahana taratra X amin'ny BGA sy fonosana sarotra hafa.
• raha misy olan'ny fivoriambe hita, ny injenierantsika efa za-draharaha dia afaka mamaha izany alohan'ny fandefasana azy.
• Manana ekipa tena za-draharaha izahay hamaha ny olan'ny fivondronana rehetra ary handefa ireo PCB manana kalitao tsara ara-potoana aminao.
Matoky izahay amin'ny fanomezana anao ny tsara indrindra mitambatra amin'ny serivisy fivoriambe PCB fihodinana, kalitao, vidiny ary ora fanaterana ao amin'ny laharam-pivoriambe PCB fivoriambe kely sy ny filaminan'ny fiangonana Mid batch Volume PCB.
Raha mitady mpanamboatra fivoriambe PCB mety ianao dia alefaso ny rakitra BOM sy ny rakitra PCB anao sales@pcbfuture.com . Tsiambaratelo tanteraka ny rakitrao rehetra. Handefa anao teny nalaina marimarina izahay miaraka amin'ny fotoana fitarihana ao anatin'ny 48 ora.